အဆုံးသည် အသစ်သောအစဖြစ်သည် - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > အဆုံးအသစ်ကအချုပ်အခြာဖြစ်၏
အနာဂတ်မရှိလျှင် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် မိုက်မဲလိမ့်မည် ဟု ပေါလုက ရေးသားခဲ့သည်။1. ကောရိန္သု ၁5,19) ပရောဖက်ပြုချက်သည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး အလွန်အားရစရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်သည် ထူးခြားသောမျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကြေညာသည်။ ငြင်းခုံနိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်များပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ သူမ၏အဓိကစာများကိုသာ အာရုံစိုက်ပါက၊ သူမထံမှ ခွန်အားနှင့် သတ္တိများစွာကို ရယူနိုင်သည်။
ပရောဖက်ပြုချက်သည်သူ့ဟာသူအဆုံးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအမှန်တရားကိုဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သည်လူသားတို့ကိုမိမိနှင့်ဘုရားသခင်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေလိမ့်မည်။ ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်လွှတ်တော်မူ၏။ သူသည်ငါတို့ကိုတဖန်ဘုရားသခင်နှင့်မိ friends ဟာယဖွဲ့စေမည်အကြောင်းတည်း။ ပရောဖက်ပြုချက်ကဒီအဖြစ်မှန်ကိုကြေညာတယ်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည်ဖြစ်ရပ်များကိုကြိုဟောရန်တင်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်အားညွှန်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကဘယ်သူလဲ၊ သူကဘယ်လိုလဲ၊ သူဘာလုပ်တယ်၊ ငါတို့ဆီကသူမျှော်လင့်တာကိုပြောတယ်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည်လူတို့အားယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်လာစေသည်။
ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် တိကျသောပရောဖက်ပြုချက်များစွာ ပြည့်စုံခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ပြည့်စုံမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေပါသည်။ သို့သော် ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံး၏ အာရုံမှာ လုံးဝကွဲပြားသည်- ကယ်တင်ခြင်း- အပြစ်များ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ရောက်ရှိလာသော ထာဝရအသက်။ ဘုရားသခင်သည် သမိုင်းကိုအုပ်စိုးသူဖြစ်ကြောင်း ပရောဖက်ပြုချက်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသည် (ဒံယေလ 4,14); ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်ခံ့စေသည် (ယော ၁4,29) အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ပေးသည် (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,13-18) ။
ခရစ်တော်အကြောင်း မောရှေနှင့် ပရောဖက်များ ရေးခဲ့သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာ သူသည် အသေခံပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။4,27 u. 46). ဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်း (း၄၇) ကဲ့သို့သော ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် အဖြစ်အပျက်များကို ကြိုပြောခဲ့ကြသည်။
ပရောဖက်ပြုချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်၌ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ညွှန်ပြသည်။ ဒါကို နားမလည်ရင် ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးက ငါတို့အတွက် အသုံးမဝင်ဘူး။ ခရစ်တော်အားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆုံးမရှိသောနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည် (ဒံယေလ 7,13စာ-၁၄ နှင့် ၂၇)။
သမ္မာကျမ်းစာက ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းတို့ကို ကြေငြာထားပြီး ထာဝရပြစ်ဒဏ်များနှင့် ဆုလာဘ်များကို ကြေငြာထားသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ ရွေးနှုတ်ခြင်းသည် လိုအပ်ကြောင်း လူတို့အားပြသပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ရွေးနုတ်ခြင်းခံရမည်မှာ သေချာပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တာဝန်ခံစေမည်ဟု ပရောဖက်ပြုချက်က ဖော်ပြသည် (ယုဒ ၁၄-၁၅)၊3,9) ငါတို့ကို ရွေးနှုတ်ပြီးပြီ၊1. ဂျိုဟန် 2,1စာ-၂)။ မကောင်းမှုမှန်သမျှ အောင်နိုင်လိမ့်မည်၊ မတရားမှုနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံး ချုပ်ငြိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။1. ကောရိန္သု ၁5,25; ဗျာဒိတ် ၂1,4).
ပရောဖက်ပြုချက်သည် ယုံကြည်သူအား ခွန်အားဖြစ်စေသည်- သူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည် အချည်းနှီးမဟုတ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမှ ကယ်တင်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပရောဖက်ပြုချက်က ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ သစ္စာရှိမှုကို အမှတ်ရစေပြီး သူ့အပေါ် သစ္စာရှိဖို့ ကူညီပေးတယ်။2. ဓာတ်ဆီ 3,10နှစ်ဆယ် 1. ဂျိုဟန် 3,2စာ-၃)။ ပရောဖက်ပြုချက်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာဝရဆက်ဆံရေးကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးရန် ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းဘဏ္ဍာများအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
ဇာခရိသည် နောင်တရရန် ခေါ်ဆိုမှုအဖြစ် ပရောဖက်ပြုချက်ကို ရည်ညွှန်းသည် (ဇာခရိ 1,3စာ-၄)။ ဘုရားသခင်သည် ပြစ်ဒဏ်ကိုသတိပေးသော်လည်း နောင်တကိုမျှော်လင့်သည်။ ယောနပုံပြင်တွင် နမူနာပြထားသည့်အတိုင်း၊ လူများထံလှည့်လာသောအခါ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကြေငြာချက်များကို ရုပ်သိမ်းရန် အသင့်ရှိနေသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်၏ ပန်းတိုင်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဘုရားသခင်ထံ ကူးပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကလိထိုးခြင်းကို ကျေနပ်စေရန် မဟုတ်ဘဲ "လျှို့ဝှက်ချက်များ" ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။
အခြေခံလိုအပ်ချက် - သတိ
ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့နားလည်နိုင်သနည်း။ သတိကြီးစွာဖြင့်သာ။ ကောင်းမွန်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောပရောဖက်ပြုချက် "ပရိသတ်များ" သည် the ၀ ံဂေလိတရားကိုမှားယွင်းစွာဟောကိန်းထုတ်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းစွာကောက်ယူသောယုံကြည်ချက်များဖြင့်အယောင်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်လူအချို့ကသမ္မာကျမ်းစာကိုကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်ကြပြီးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုပင်ပြောင်လှောင်ကြသည်။ မှားယွင်းသောဟောကိန်းများသည်ယုံကြည်မှုကိုအားနည်းစေနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သတိထားရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးကြီးထွားမှုနှင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာလမ်းစဉ်အတွက် အလေးအနက်ကြိုးစားရန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများ မလိုအပ်သင့်ပါ။ အချိန်နှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိခြင်း (မှန်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း) ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အာမခံချက်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၊ ဤသို့မဟုတ်ဤလောကအာဏာကို "သားရဲ" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရနိုင်သည်ဖြစ်စေ, ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများအပေါ်မဟုတ်ဘဲခရစ်တော်ကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
အနာဂတ္တိကျမ်းကိုစွဲလမ်းခြင်းကကျွန်ုပ်တို့သည် the ၀ ံဂေလိတရားကိုအလေးအနက်မထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူသည်နောင်တရပြီးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရမည်။ ခရစ်တော်ပြန်လာချိန်နီးသည်ဖြစ်စေ၊ ထောင်စုနှစ်တစ်ခုရှိမည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေအမေရိကတိုက်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေမသည်ဖြစ်စေ၊
အဘယ်ကြောင့်အနာဂတ္တိအနက်ကိုဘော်ပြရန်ခက်ခဲသနည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းပြချက်သူမကမကြာခဏသင်္ကေတများ၌ပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မူရင်းစာဖတ်သူတွေကသင်္ကေတတွေဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာသိခဲ့ကြပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်အချိန်တွင်နေထိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပို၍ ပြproblemနာရှိသည်။
ပုံဆောင်ဘာသာစကား ဥပမာ- ဆာလံ ၁၈။ သူသည် ဒါဝိဒ်ကို ရန်သူများလက်မှ ဘုရားသခင် ကယ်တင်ပုံကို ကဗျာဆန်သောပုံစံဖြင့် ဖော်ပြသည် (အခန်းငယ် ၁)။ ဒါဝိဒ်သည် ဤအရာအတွက် အမျိုးမျိုးသော သင်္ကေတများကို အသုံးပြုသည်- (၄-၆)၊ မြေငလျင် (၈)၊ ကောင်းကင်၌ နိမိတ်လက္ခဏာများ (၁၀-၁၄)၊ ပင်လယ်၌ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ခြင်းပင် (၁၆-၁၇)။ ဤအရာများသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်မလာသော်လည်း အချို့သောအချက်အလက်များကို မြင်သာစေရန်အလို့ငှာ၊ ၎င်းတို့ကို မြင်သာစေရန်အတွက် ပုံဆောင်သဘောအရ၊ ပုံဆောင်သဘောအရ အသုံးပြုကြသည်။ ဤသည်မှာလည်း ပရောဖက်ပြုချက် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
Isaiah 40,3:4တွင် တောင်များကို ဖြိုဖျက်ပြီး လမ်းများပင် ပြုလုပ်သည်ဟူသော အချက်ကို ပြောသည် - ဤသည်မှာ စာသားအရ မဆိုလိုပါ။ လု 3,4(၆) ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အားဖြင့် ဤပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံကြောင်း ဖော်ပြသည်။ တောင်တွေ၊ လမ်းတွေအကြောင်း လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
ယောလ 3,1-၂ “ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့အပေါ်” ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းမည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်သည်။ ပေတရု၏အဆိုအရ၊ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် လူဒါဇင်အနည်းငယ်နှင့် ပြည့်စုံနေပြီဖြစ်သည် (တမန်တော်များ၏တမန်တော်များ၊ 2,16စာ-၁၇)။ Joel ပရောဖက်ပြုခဲ့သော အိပ်မက်များနှင့် ရူပါရုံများကို ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ပေတရုသည် စာရင်းအင်းဝေါဟာရများတွင် ပြင်ပနိမိတ်လက္ခဏာများ၏ အတိအကျပြည့်စုံမှုကို မတောင်းဆိုဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း မတောင်းဆိုသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုပ်ပုံများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောအခါတွင်၊ ပရောဖက်ပြုချက်၏အသေးစိတ်အချက်များအားလုံးကို စကားအသုံးအနှုန်းဖြင့် ထင်ရှားစေရန် မမျှော်လင့်ပါ။
ဒီပြissuesနာတွေကလူတွေရဲ့ကျမ်းစာကြိုဟောချက်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ် စာဖတ်သူတစ် ဦး သည်ပကတိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကိုတစ်မျိုး၊ နောက်တစ်နည်းမှာပုံဆောင်စကားပြန်ကိုပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးမည်သည့်အရာသည်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကအသေးစိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲပိုကြီးတဲ့ပုံကိုကြည့်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းအားပေးသည်။ ကျနော်တို့မှန်ဘီလူးမှတဆင့်မဟုတ်အေးခဲနေသောဖန်တဆင့်ကြည့်ရှုပါ။
ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာအရေးကြီးသောနေရာများစွာတွင်ခရစ်ယာန်သဘောတူညီမှုမရှိပါ။ ဒီတော့ z ။ ခ။ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ကြီးစွာသောဒုက္ခ၊ ထောင်စုနှစ်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်ငရဲတို့၏ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များ။ တစ် ဦး ချင်းအမြင်ကဒီမှာသိပ်အရေးမကြီးဘူး။ သူတို့သည်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်အတွက်အရေးကြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောအဖြေများအားလုံးကိုဤနေရာတွင်ရယူရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားသည်တစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်ထင်မြင်ယူဆခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်ပြုချက်ကိုခရီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အမြန်နှုန်းနှင့်မည်သည့်နေရာသို့ရောက်မည်ကိုအတိအကျမသိရန်ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုအပ်သည်မှာ“ ခရီးသွားလမ်းညွှန်” ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ လမ်းခရီးကိုသူသိတယ်၊ သူမရှိရင်ငါတို့လမ်းလွဲသွားတယ် သူနှင့်အတူကပ်ကြပါစို့ - သူသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်သံသယများဖြင့်အနာဂတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေခံခရစ်ယာန်အယူဝါဒအချို့ကိုယခုသုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။
အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏သွန်သင်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည့် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ရပ်မှာ ခရစ်တော်၏ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ ပြန်လာမယ်လို့ သဘောတူညီချက် အပြည့်အစုံနီးပါး ရှိပါတယ်။ “တဖန်ကြွလာတော်မူမည်” ဟု တပည့်တော်တို့အား ကြေငြာခဲ့သည် (ယော၊ ၁4,3) တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ရက်စွဲများကိုတွက်ချက်ရာတွင် အချိန်မဖြုန်းကြရန် တပည့်တော်များအား သတိပေးခဲ့သည်။4,36) အချိန်နီးနေပြီလို့ ယုံကြည်သူတွေကို ဝေဖန်တယ်။5,1စာ-၁၃) ဒါပေမယ့်လည်း ယုံကြည်သူတွေဟာ ကြာရှည်စွာ ကြန့်ကြာနေတာ (မဿဲ ၂4,45စာ-၅၁)။ အကျင့်စာရိတ္တ- ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းအတွက် အမြဲပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲတမ်း အသင့်ရှိနေရန် လိုအပ်သည်၊ ယင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်တမန်များက တပည့်များအား ဤသို့ကြေညာခဲ့သည်– ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ကြွလာတော်မူသည်နှင့်အမျှ သူသည်လည်း တစ်ဖန်ကြွလာလိမ့်မည် (တမန်တော်များ၏တမန်တော်များ၊ 1,1၁)။ သူသည် “မီးလျှံ၌ တန်ခိုးတော်၏ ကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူ ကောင်းကင်မှ မိမိကိုယ်ကို ထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်။” (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 1,7-၈)။ ပေါလုက ၎င်းအား "ကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေတော်နှင့် ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်၏အသွင်အပြင်" (တိတု၊ 2,13) “ယေရှုခရစ် ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီ” ဟူသောအချက်ကိုလည်း ပေတရုပြောပါသည်။1. ဓာတ်ဆီ 1,7; အခန်းငယ် ၁၃ ကိုလည်းကြည့်ပါ) ထိုနည်းတူ ယောဟန် (1. ဂျိုဟန် 2,28) အလားတူ ဟေဗြဲလူများထံပေးစာတွင်၊ ယေရှုသည် “ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို စောင့်မျှော်နေသောသူတို့” အတွက် “ဒုတိယအကြိမ်” ပေါ်ထွန်းတော်မူမည်။9,28) ကျယ်လောင်သော “အမိန့်တော်”၊ “ကောင်းကင်တမန်၏အသံ”၊ “ဘုရားသခင်၏တံပိုး” (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,16) ဒုတိယကြွလာခြင်းသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာမည်၊ မြင်နိုင်၊ ကြားနိုင်လိမ့်မည်၊ မမှားနိုင်ပေ။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း နှင့် တရားစီရင်ခြင်း ၊ ရှင်ပေါလုသည် သခင်ကြွလာတော်မူသောအခါ၊ ခရစ်တော်၌ သေလွန်သောသူတို့သည် ထမြောက်ကြလိမ့်မည်၊၊ တချိန်တည်းတွင် သက်ရှိယုံကြည်သူများ ကြွလာတော်မူသော သခင်ကို ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာ လေထဲသို့ ချီဆောင်ခြင်းခံရမည်ဟု ပေါလုရေးခဲ့သည်။2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,16စာ-၁၇)။ “အကြောင်းမူကား တံပိုးမှုတ်လိမ့်မည်” ဟုပေါလုရေးသားခဲ့သည်– “သေလွန်သောသူတို့သည် မပျက်စီးနိုင်သော ထမြောက်ကြလိမ့်မည်၊1. ကောရိန္သု ၁5,5၂)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသွင်ပြောင်းခြင်းကို ခံရသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည် "ဘုန်းကြီး" သော၊ အားကြီးသော၊ မဖောက်ပြန်နိုင်သော၊ မသေနိုင်သော၊ ဝိညာဉ်ရေးရာများ ဖြစ်လာကြသည် (း၄၂-၄၄)။
မဿဲ ၂4,31 ဤအရာကို မတူညီသောရှုထောင့်မှဖော်ပြပုံရသည်- "ထိုသူ [ခရစ်တော်] သည် တောက်ပသောတံပိုးများနှင့်အတူ ကောင်းကင်တမန်များကို စေလွှတ်တော်မူမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းကင်တမန်မှတပါး အခြားသောအရပ်သို့ ကောင်းကင်တမန်တို့ကို စုဝေးစေတော်မူလိမ့်မည်။ စပါးပင်ပုံဥပမာတွင် ယေရှုက “မိမိကောင်းကင်တမန်များကို စေလွှတ်၍ အယူဖောက်ပြန်သောသူတို့နှင့် ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့အား မိမိနိုင်ငံမှစုဝေးစေ၍ မီးဖိုထဲသို့ ချပစ်ကြလိမ့်မည်။ “ (မဿဲ ၁3,40-42) ။
"အကြောင်းမူကား၊ လူသားသည် ခမည်းတော်၏ ဘုန်းအသရေကို ကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူ ကြွလာ၍၊ သူပြုသမျှအတိုင်း လူတိုင်းကို ဆုချလိမ့်မည်။" (မဿဲ ၁။6,27) သစ္စာရှိကျွန်ပုံဥပမာတွင် (မဿဲ ၂4,45-၅၁) အပ်နှင်းထားသော ခွက်ပုံဥပမာ (မဿဲ ၂5,14-30) တရားရုံးတွင်လည်း ရှိသည်။
သခင်ကြွလာသောအခါ ပေါလုက “မှောင်မိုက်၌ ဝှက်ထားသောအရာတို့ကို လင်းစေလိမ့်မည်” ဟုရေးသားခဲ့ပြီး စိတ်နှလုံး၏ဆန္ဒများကို ထင်ရှားစေလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည် လူအပေါင်းတို့အား ချီးမွမ်းခြင်းကို ပေးတော်မူလိမ့်မည်။” (1. ကောရိန္သု 4,5) ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘုရားသခင်က လူတိုင်းကို သိထားပြီးဖြစ်လို့ ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင် ကြာမြင့်စွာကတည်းက တရားစီရင်ခြင်းခံရပါတယ်။ သို့သော် ယင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ပြီး လူတိုင်းအား ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အသက်တာသစ်ပေး၍ ဆုချခံရခြင်းသည် ကြီးမားသောအားပေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအခန်း” ၏အဆုံးတွင် ပေါလုက “ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကိုအောင်နိုင်စေတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတော်ရှိတော်မူစေသတည်း။ ထို့ကြောင့်၊ ငါ့ချစ်သောညီအစ်ကိုတို့၊ သခင်ဘုရား၏အမှုတော်သည် အချည်းနှီးမဟုတ်ကြောင်း သိမှတ်လျက်၊ ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာ မနှောင့်ယှက်နိုင်ဘဲ အမြဲတိုးများနေကြလော့။1. ကောရိန္သု ၁5,57-58) ။
စိတ်ပါဝင်စားစေရန်အတွက် ပရောဖက်ပြုချက်ဆရာများက “ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသက်ရှင်နေသလော” ဟုမေးလိုပါသည်။ အဖြေမှန်က "Yes" - 2000 နှစ်တိုင်တိုင် မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ ပေတရုသည် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များအကြောင်း ပရောဖက်ပြုချက်ကို ကိုးကားပြီး သူ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်နှင့် သက်ဆိုင်သည် (တ 2,16စာ-၁၇) ထိုနည်းတူ ဟေဗြဲ (Hebrews) ထံသို့ စာရေးဆရာ၊ 1,2) လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်က လူအချို့ထင်သည်ထက် ပိုကြာလာခဲ့သည်။ စစ်ပွဲနှင့် ခက်ခဲမှုများသည် လူသားမျိုးနွယ်ကို နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ဒုက္ခပေးခဲ့သည်။ ပိုဆိုးသွားမှာလား။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ အခြေအနေတွေ ပိုကောင်းလာမယ်၊ ပြီးတော့ ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ချိန်တည်းမှာ လူတချို့အတွက် ပိုကောင်းလာပြီး တခြားသူတွေအတွက်လည်း ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ "ဆင်းရဲမှုအညွှန်းကိန်း" သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် အတက်အဆင်း ရွေ့လျားနေပြီး ယင်းသည် ဆက်လက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော် ခရစ်ယာန်အချို့အတွက် အထပ်ထပ်အခါခါ ယင်းသည် “မဆိုးလှပေ” ဟူ၍ သိသာထင်ရှားပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလိုအပ်ဆုံးအချိန်ဟု ဖော်ပြထားသည့် ကြီးစွာသောဒုက္ခကို ငတ်လုနီးပါး ငတ်နေကြသည်4,21) ၎င်းတို့သည် အန္တိခရစ်၊ "သားရဲ"၊ "အပြစ်တရား၏လူ" နှင့် ဘုရားသခင်၏ အခြားရန်သူများကို စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်တိုင်းတွင် ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတော့မည့် နိမိတ်လက္ခဏာကို သူတို့ပုံမှန်မြင်နေရသည်။
ကြီးစွာသောဒုက္ခ (သို့မဟုတ်: ကြီးစွာသောဒုက္ခ) ကို ယေရှုကြိုဟောခဲ့သည်မှာ မှန်သည် (မဿဲ ၂၊4,21) သို့သော် သူကြိုပြောထားသည့်အရာအများစုသည် အနှစ် ၇၀ တွင် ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းရံထားပြီးဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် တပည့်တော်များအား မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရမည့်အရာများအကြောင်း၊ z B. ယုဒပြည်သားတို့သည် တောင်ပေါ်သို့ပြေးရန် လိုအပ်မည် (း၁၆)။
ယေရှု ပြန်လာချိန်အထိ အဆက်မပြတ်လိုအပ်နေသည့်အချိန်များကို ကြိုပြောခဲ့သည်။ “ဤလောက၌ သင်တို့သည် ဆင်းရဲခြင်းရှိကြ၏” ဟု မိန့်တော်မူသည် (ယော၊ ၁6,33, အရေအတွက်ဘာသာပြန်) ။ တပည့်တော်များစွာသည် ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအတွက် သူတို့၏အသက်ကို စတေးခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှုများသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြဿနာအားလုံးမှ ကာကွယ်ပေးတော်မမူပါ။4,22; 2. တိမောသေ 3,12; 1. ဓာတ်ဆီ 4,12) ထိုအချိန်၌ပင်၊ တမန်တော်ခေတ်တွင်၊1. ဂျိုဟန် 2,18 & 22; 2. ယော ၇)။
အနာဂတ်မှာကြီးစွာသောဒုက္ခကြိုဟောထားသလား။ ခရစ်ယာန်များစွာကဒါကိုယုံကြပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းနှင့်ချီသောခရစ်ယာန်များသည်ယနေ့တိုင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံနေကြရသည်။ လူများစွာသေဆုံးခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုခုအတွက်တော့ဒီဒုက္ခသည်ကအရင်ကထက်ပိုဆိုးလာတယ်။ ထောင်စုနှစ်နှစ်ခုလုံးသည်ခရစ်ယာန်များကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြီးစွာသောဒုက္ခသည်လူအများထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုကြာနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်တာ ၀ န်များသည်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လုနီးပြီဖြစ်စေ၊ နီးသည်ဖြစ်စေ၊ အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားခရစ်တော်ကဲ့သို့ ပို၍ ဖြစ်လာရန်မကူညီနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုလူတို့အားနောင်တယူရန်တိုက်တွန်းရန်အတွက်သြဇာအဖြစ်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်အလွန်မှားယွင်းစွာအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်မှန်းသူတွေဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုနည်းနည်းပဲအသုံးပြုနေကြတယ်။
ဗျာဒိတ် ၂၀ တွင်ခရစ်တော်နှင့်သူတော်စင်တို့၏အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်ချုပ်မှုအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ခရစ်ယာန်အချို့သည်၎င်းကိုစာသားအတိုင်းအနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်အဖြစ်ခရစ်တော်ပြန်လာချိန်၌တည်ထောင်မည်ဟုနားလည်ကြသည်။ အခြားခရစ်ယာန်များသည်နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုဒုတိယသင်္ချိုင်းတော်မတိုင်မီဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ခရစ်တော်အုပ်ချုပ်မှု၏သင်္ကေတအဖြစ်သင်္ကေတအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ထောင်ဂဏန်းကို ပုံဆောင်သဘောဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ 7,9; ဆာလံ ၅၀:၁၀)၊ ၎င်းကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် စာသားအတိုင်း ယူရမည်ဟု အထောက်အထားမရှိပါ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ရုပ်ပုံများ အထူးတလည် ကြွယ်ဝသော ပုံစံဖြင့် ရေးသားထားသည်။ ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာချိန်တွင် တည်စေမည့် ယာယီနိုင်ငံတော်အကြောင်း အခြားကျမ်းစာများတွင် မဖော်ပြထားပါ။ ဒံယေလနှင့်တူသောကျမ်းပိုဒ်များ 2,44 ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်မူ အင်ပါယာသည် နောင်နှစ်ပေါင်း 1000 တွင် အကျပ်အတည်းမရှိဘဲ ထာဝရတည်ရှိနေမည်ဟုပင် အကြံပြုထားသည်။
ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံရှိလျှင် လူဆိုးတို့သည် ထမြောက်ပြီး ဖြောင့်မတ်ပြီးနောက် အနှစ်တစ်ထောင်တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည် (ဗျာဒိတ် ၂၀း၅)။ သို့သော်၊ ယေရှု၏ပုံဥပမာများသည် အချိန်ကွာဟချက်ကို မဖော်ပြပါ။ (မဿဲ ၂5,31စာ-၄၆; ယော 5,28စာ-၂၉)။ ထောင်စုနှစ်သည် ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရား၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ ဖြောင့်​မတ်​သူ​နှင့် ဆိုး​ညစ်​သူ​တို့​သည် ထို​နေ့​တွင် ရှင်​ပြန်​ထ​မြောက်​လိမ့်​မည်​ဟု ပေါ​လု​ရေး​ခဲ့​၏။2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 1,6-10) ။
ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်သောအခြားတစ် ဦး ချင်းမေးခွန်းများကိုဆွေးနွေးနိုင်သော်လည်းဤနေရာ၌မလိုအပ်ပါ။ ကိုးကားထားသောအမြင်တစ်ခုစီအတွက်မှတ်တမ်းတင်ကိုးကားချက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီအနှစ်တစ်ထောင်၏ယုံကြည်မှုမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူသေချာသည့်အရာတစ်ခုမှာဗျာဒိတ် ၂၀ တွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်ကာလသည်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်၊ ထာဝရ၊ ဘုန်းကျက်သရေရှိသော၊ ပိုမိုကြီးမားသော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ဒါကြောင့်မနက်ဖြန်ရဲ့အံ့ဖွယ်ကမ္ဘာကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါယာယီအဆင့်မဟုတ်ဘဲထာဝရပြီးပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ရန်ထာ ၀ ရထာဝရရှိသည်။
ထာဝစဉ် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲသိတယ် (1. ကောရိန္သု ၁3,9; 1. ဂျိုဟန် 3,2အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ စကားလုံးများနှင့် အတွေးအမြင်အားလုံးသည် ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခြေခံသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရဆုလာဘ်ကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် သရုပ်ဖော်ခဲ့သည်- ၎င်းသည် ရတနာရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများစွာရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတက်ခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအရာများသည် အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြချက်များသာဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်တူသောအရာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာဝရကာလသည် စကားလုံးများထက် ပို၍ လှပနေမည်ဖြစ်သည်။
ဒါဝိဒ်က ဤသို့ဆိုသည်– “ကိုယ်တော်၏လက်ယာတော်၌ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းအစဉ်အမြဲရှိ၏” (ဆာလံ ၁း၁)။6,11) ထာဝရကာလ၏ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ အသက်ရှင်နေလိမ့်မည်။ သူကဲ့သို့ဖြစ်ရန်၊ သူတကယ်ဘာလဲဆိုတာ သိဖို့၊ သူ့ကို ပိုသိပြီး အသိအမှတ်ပြုဖို့ (1. ဂျိုဟန် 3,2) ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အန္တိမပန်းတိုင်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်အလိုရှိတော်မူသော ဖြစ်ခြင်းသဘောဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ကျေနပ်စေပြီး ထာဝရပျော်ရွှင်မှုကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ တွင်သန်းပေါင်းများစွာသောင်းနှင့်ချီ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ကာကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုပြုံးပြီးကျွန်ုပ်တို့သေသည့်အချိန်၌ဘုရားသခင်သည်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမည်မျှလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုအံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအစမျှသာဖြစ်ပြီးအဆုံးလည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မိုက်ကယ် Morrison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်